मुक्तिनाथ, चिलिमे र आइसिएफसी फाइनान्सको लाभांस पाउनुभो? नपाएमा यसो गर्नुस। – Eps Sathi
January 17, 2021 725
आइसिएफसी फाइनान्स लिमिटेडले आर्थिक बर्ष ०७६/७७ को नगद लाभांस सेयरधनीको बैंक खातामा पठाएको छ। कम्पनीले ०७६/७७ मा आफ्ना सेयरधनीहरुलाई जम्मा १५ प्रतिशत बोनस बाँडेको थियो जसमा १०.५ प्रतिशत बोनस सेयर र ४.५ प्रतिशत नगद लाभांस रहेको थियो। बोनस वितरणपछि फाइनान्सको चुक्ता पूँजी ९ करोड ७२ लाख ८२ हजार ७१० ले बढ्नेछ। फाइनान्सले ४.५ प्रतिशतले हुन आउने नगद लाभांस ४ करोड १६ लाख ९२ हजार ५९० रुपैयाँ सेयरधनीहरुको खातामा पठाएको छ।
मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले आर्थिक बर्ष ०७६/७७ को नगद लाभांस सेयरधनीको बैंक खातामा पठाएको छ। कम्पनीले ०७६/७७ मा आफ्ना सेयरधनीहरुलाई जम्मा १५ प्रतिशत बोनस बाँडेको थियो जसमा ११.२५ प्रतिशत बोनस सेयर र ४.२५ प्रतिशत नगद लाभांस रहेको थियो। बैंकले ४.२५ प्रतिशतले हुन आउने नगद लाभांस सेयरधनीहरुको खातामा पठाएको छ।
चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडले पनि आर्थिक बर्ष ०७६/७७ को नगद लाभांस सेयरधनीको बैंक खातामा पठाएको छ। कम्पनीले ०७६/७७ मा आफ्ना सेयरधनीहरुलाई जम्मा २० प्रतिशत बोनस बाँडेको थियो जसमा १० प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांस रहेको थियो। चिलिमेले १० प्रतिशतले हुन आउने नगद लाभांस सेयरधनीहरुको खातामा पठाएको छ।
आइसिएफसी, मुक्तिनाथ र चिलिमे ३ वटै कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई नगद लाभांश खातामा पठाइसकेका छन्। डि म्याट खातामा बैंक खाता कनेक्ट गरेका सबै सेयरधनीले लाभांश पाइसकेका छन्। खाता कनेक्ट नगरेका सेयरधनीले खाता लिङ्क गराउनुपर्नेछ। कागजि सेयर प्रमाणपत्र भएका सेयरधनीले लाभांश पाउनका लागि भने प्रमाणपत्रलाई डि म्याट गराउनुपर्दछ।
Posted in खेलकुद, भिडियो, मनोरंजन, रोचक, समाचार, सेयर बजार, स्वास्थ्य /जिबनशैली
Prevसानिमा बैंकले थप्यो अर्को शाखा, देशभर कति पुग्यो त शाखा संख्या?
Nextचन्द्रागिरी हिल्सको आइपिओ रिजल्ट कहिले?